Ishlanu sika-Ismail isiza ama-Proteas women agcine i-T20 series isaphila
Chloe Tryon of South Africa celebrates the fifth wicket for Shabnim Ismail of South Africa during the 3rd Womens T20 International match between South Africa and India at Bidvest Wanderers Stadium on February 18, 2018 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Gordon Arons/Gallo Images)
u-Shabnim Ismail uthole i-career-best engu-5/30 ukusiza ama-Momentum Proteas ahlule i-India ngama-wicket amahlanu kumdlalo wesithathu we-Cricket South Africa (CSA) Women’s T20 e-Bidvest Wanderers ngeSonto. Izivakashi zingaphambili ngo-2-1.
i-India ikhishwe yonke ngo-133 kuma-overs angu-17.5 ngenxa ye-spell sika-Ismail esimangazayo esisekelwe u-Masabata Klass, othole u-1/20. Kuphinde kubalwe u-Marizanne Kapp oluqalise kahle iqembu, wathola i-wicket ka-Mithali Raj (0) kwi-over yokuqala yomdlalo. Uqede eno-1/6 kuma-overs amathathu okubalwa khona i-wicket maiden emuva kokuthi iqembu lasekhaya linqobe i-toss futhi likhethe ukuvimba.
Ukapteni we-India u-Harmanpreet Kaur (48) no-Smriti Mandhana (37) bayibuyise kahle i-innings kodwa ama-wicket aphume ngokulandelana, abaphosayo bengaivumeli iqembu elishayayo ukukhululeka isikhathi eside.
i-South Africa iqale ngokulahlekelwa i-wicket ka-Lizelle Lee kumdlalo wesithathu kulandelana, manje ephuma ngama-runs amahlanu kuphose u-Pooja Vastrakar (2/21). Ukapteni u-Dané van Niekerk uthole ama-runs angu-26 emabholeni angu-20 (5 fours) ngaphambi kokuthi u-Suné Luus (41 off 34 balls) no-Mignin du Preez (20) baphinde bakha.
u-Poonam Yadav ukhiphe umuntu nge-over yesi-14 ama-Proteas edinga ama-runs angu-50 ukuthi anqobe emabholeni angu-50. Kwangena u-Chloe Tryon onengozi oshaye ama-runs angu-34 emabholeni angu-15, esondeza iqembu lakhe ngasekunqobeni. Bebedinga ama-runs amathathu ngesikhathi ephuma futhi bazihlula izivakashi ekugcineni.
I-series idlulela e-SuperSport Park ngoLwesithathu, 21 February lapha iqhubekela khona ukungalingani. Yonke imidlalo kumele inqotshwe kwi-South Africa kuze kube umdlalo wesihlanu futhi wokugcina e-PPC Newlands ngoMgqibelo, 24 February. Imidlalo esele izovezwa ku-SuperSport 2.
u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20